Iphrofayela Aluminium ngoba strip LED: izinhlobo kanye nezici yokusetshenziswa
Kuze kube manje, ukukhanyisa LED iyaduma kakhulu. Iqiniso ukuthi izakhi ethulwa anganika ukukhanya okukhulu, futhi musa athatha amandla. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo efana langena ngempumelelo kunoma iyiphi elingaphakathi. Ukuze wenze lokhu ukukhanyisa enhle liyadingeka iphrofayela aluminium for strip LED.
Umkhiqizo samanje ufakwa bezinhlamvu metal futhi ivale ikhava esobala noma opaque. Kufanele kuqashelwe ukuthi ithephu kuvikelwe ingcina ekhethekile noma vraspor. Metal umzimba has a inzuzo enkulu: ikhono Ukupholisa diodes. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo okuhlala isikhathi eside futhi ayidingi ukunakekelwa okukhethekile. Kumelwe ukuthi has a ukubukeka emnandi futhi uyakwazi ukushintsha ingaphakathi libe ngcono. Ngenxa isibani ezinjalo, ungakha isimo ekhethekile phakathi kwekamelo lakho lokulala noma ngcono ukukhanyisa umsebenzi endaweni.
Aluminium iphrofayeala strip LED kungenzeka anobude obungalingani, kodwa ngokuvamile kuba 2.1 amamitha. Njengoba ukumelwa izakhi Kulula kakhulu ukusika, ungenza isibani usayizi edingekayo. Iphrofayela Kulula kakhulu ukufaka. Kwanele ingcina noma ngezikulufo ukubophela phansi.
Aluminium iphrofayeala strip LED ngokuvamile kakhulu esetshenziswa ekhishini ukuze azenze zikhanye endaweni emsebenzini, izinyathelo kanye ezindongeni. Ungayisebenzisa owawusemzini womzalwane noma ifulethi, kanye nasezindaweni zomphakathi. Kuye uhlobo iphrofayela uyoba nethuba ulungise isiqondiso ugongolo ukukhanya. Kufanele kuqashelwe ukuthi i-elementi metal ethulwa kungaba thembeke avikeleke emimoyeni emibi umswakama ngumuntu ekhethekile ukubekwa uphawu strip. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukusebenzisa isibani ezimweni ezinzima futhi emgwaqeni.
Aluminium iphrofayeala strip LED kungaba ngezinhlobo eziningi: emincane lalihlehliswa futhi phezulu. Uhlobo lomkhiqizo yesibili, kuyatuseka ukusebenzisa ngokokuhlobisa ukukhanyisa. Bopha esebenzisa kungenzeka tape kabili emaceleni noma i-glue. izindlu lalihlehliswa ingasetshenziswa ngokuhlanganyela lid matte ezithambile chitha ukukhanya ukuthi kuyoba. Futhi isakhiwo esinjalo kungase kudingeke lowehlukile, ngakho-ke ungakwazi ukuhlobisa igumbi.
Corner lephrofayela strip LED singasetshenziswa kulezo zindawo lapho ugongolo isiqondiso engela kufanele kube 45 degrees. Ngaphezu kwalokho, amaKristu anjalo anomusa izakhi kungenziwa agibele amahhashi kuphi. Banezinhliziyo isesimweni esihle, okuyinto ikuvumela ukufaka isibani lapho ezivamile ukukhanya ama basuke ayifakiwe. amaphrofayli Aluminium ingalungiswa ngisho emafasiteleni okukhanyisa iwindi noma kwenza umoya romantic ekamelweni.
Nale iphrofayli, awukwazi kuphela ikhanyisa wonke indlu, kodwa futhi ukuhlobisa it. Lapho ukuthi izindleko strip LED incane. Ngakho, intengo ubuncane imitha ngalinye kuba $ 1.5. Ngakho ungakwazi ulinamathisela njengoba nini, noma kuphi.
Floating screed: ukufakwa ubuchwepheshe kanye nokubuyekeza
Indlela yokwenza phansi on emphemeni ngezandla zakhe